Twitter Dashboard bụ ngwa ọrụ maka obere azụmaahịa | Gam akporosis
Twitter Dashboard bụ ngwa maka netwọkụ mmekọrịta lekwasịrị anya na obere azụmaahịa
Twitter aghọwo ụzọ kọntaktị ka gị na ndị ahịa n'ọdịnihu nwee mmekọrịta chiri anya ma ọ bụ mepee ohere nke azụmaahịa site na ịnwe mmekọrịta n'etiti ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Ike nke netwọkụ mmekọrịta na-ebili na ihe karịrị ihe anyị ji eme, ọ nweghịkwa ihe ọzọ ị ga-ahụ ka Instagram si bụrụ souk ebe ụdị ndị nka niile na-egosipụta nka ha na okwu plastik ọ bụla.
Ugbu a bụ mgbe netwọkụ nzi ozi micro chọrọ dochie umuaka site na iji ngwa akpọrọ Twitter Dashboard na nke ahụ n’enye gị ohere inwe otu ebe maka usoro iheomume na ọnụọgụ, yana oke nhọrọ nke ga - enwe ike ịmezi tweets iji wee jikwaa ozi ndị ezitere site na nnukwu ikpo okwu a nwere ọtụtụ ojiji dị iche iche dabere na ụlọ ọrụ ma ọ bụ azụmaahịa.
Ihe ntaneti Twitter bu ihe eji enyere ndi obere ahia aka ka ha na ndi ahia ha na obodo ha. Companieslọ ọrụ buru ibu na-enwe ngwá ọrụ ọkaibe, ya mere, netwọkụ mmekọrịta na-achọ ịnye otu ka azụmahịa ọ bụla, n'agbanyeghị ogo, dị enwe ike ịnweta data na ngwaọrụ dị mkpa iji bulie Twitter gị.
Nwere ike ịmepụta ndepụta nke ahaziri iche na azụmaahịa ma ọ bụ obere azụmaahịa, n'ụzọ a ị nwere ike lebara anya na tweets nke kachasị gị mma onye nchịkwa nke akaụntụ Twitter; jikwaa mmemme nke ozi ịchọrọ iru ndị na-ege ntị, omume nke enwere ike ịme site na ekwentị mkpanaaka; ma nweta echiche na mmụọ nsọ nke nwere ike inyere azụmahịa gị aka ịbawanye obodo ya ma ọ bụ uru site na ịnwe ọnụnọ ka mma na Twitter.
Dashboard Twitter dị maka ugbu a na ụdị desktọọpụ na iOS. Anyị chere na ọ gaghị ewe oge iji nweta nsụgharị gam akporo, yabụ anyị ga-ele ya anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Twitter Dashboard bụ ngwa maka netwọkụ mmekọrịta lekwasịrị anya na obere azụmaahịa
Mgbasa ozi ZTE Axon 7 zuru ụwa ọnụ na-amalite iru Europe na mbụ
Evernote na-ewelite ego ma na-egbochi akaụntụ efu